The Ab Presents Nepal » प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले ‘छौडा’ लेखेपछि सर्वत्र आलोचना!
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले ‘छौडा’ लेखेपछि सर्वत्र आलोचना!
काठमाडौ-: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले आइतबार बिहानै गरेको ट्वीट सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको विषय बनेको छ। उनले बिहानै एकदमै आक्रोसित हुँदै ट्वीटरमा लेखेका छन् भनिन्छ, छौंडाहरू आफैं चलमलाउँदैनन् कसैले छोड्छन्, दु:ख दिन्छन् यी छौंडाहरू आफैं चलमलाएका हुन् की कसैले छोडेका?
उनको यो ट्वीटपछि सामाजिक सञ्जालमा बेग्लाबेग्लै टिप्पणी पनि आइरहेको छ। उनले किन लेखे। जिम्मेवार मान्छेले यस्तो कुरा सार्वजनिक गर्दा पर्ने प्रभाव किन हेरेनन् भन्ने टिप्पणी भइरहेको छ।
नेकपाको संसदीय दलको बैठकमा आफ्नौ सांसदहरुले सरकाको कडा आलोचना गरेपछि आएको यो ट्वीटका विषयमा अहिले नेकपा वृत्तमा छलफल चलिरहेको छ।
बैठकमा सांसदहरुले सरकारले भारतबाट आउने तरकारी र फलफूलको विषदी परिक्षण गर्न रोकेको विषयका चर्को आलोचना गरेका थिए । उनीहरुले सरकार भारतसामु झुकेको समेत आरोप लगाएका थिए। गुठी विधेयकलगायतमा विषयमा पनि सत्तारुढ दलका सांसदहरु आक्रामक देखिएका थिए।
त्यसैतर्फ लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीका राजनीतिक सल्लाहाकार रिमालले छौंडा शव्दको प्रयोग गर्दै ट्वीट गरेका छन्। उनको यो ट्वीटमा प्रतिक्रिया जनाउने अधिकांशले रिमालको सोच,शैली र भाषा छनोटको चर्को विरोध गरेका छन्।
उसा किरण तिम्सिनाले रिमाललाई मेन्सन गर्दै लेखेकी छन्-‘कमरेड तपाँई पार्टीको स्यायी कमिटी सदस्य र प्रम ज्युको सल्लाहकार दुबै पद बाट राजिनामा दिनुस् । यो चेतनास्तरले दुबै पदलाई न्याय गर्न सक्दैन।
त्यस्तै विष्णु पाण्डेले पनि रिमाललाई नै मेन्सन गर्दै लेखे- कठै सल्लाहकारज्युका शब्द चयन! भोली फेरी यही समाजमा सामान्य नागरिकको रुपमा जिवन यापन गर्नु पर्ने दिन आउदैन ? कि त्यती दुरर्दर्शिता पनि छैन ? सोचाइ साह्रै निकृष्ट र भाषा तल्लो स्तरको हुनुपर्ने बिशेषता सहित सल्लाहकार पदको आबेदन माग भएको थ्यो कि पद नै यस्तो हो या पारिवारिक गुण ?